Isifuba Somoya Esibucayi: Incazelo, Izimpawu kanye Nokwelapha
Ikhaya>Siyini Isifo Somoya?>Isifuba Somoya Esibucayi: Incazelo, Izimpawu kanye Nokwelapha
Isifuba Somoya Esibucayi: Incazelo, Izimpawu kanye NokwelaphaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T13:31:20+02:00
Thola amaqiniso ngesifuba somoya esibucayi, izimpawu zaso nokuthi sihluke kanjani kwezinye izinhlobo zesifuba somoya kanye nezindlela zokwelashwa ezitholakalayo.
Siyini isifuba somoya esibucayi?
I-asthma enamandla uhlobo lwe-asthma olungaphenduli kahle ejwayelekile ukwelashwa kwesifuba somoya. Izimpawu ngokwencazelo, zinamandla kakhulu kunezimpawu ezijwayelekile ze-asthmatic futhi zingahlala isikhathi eside. Abahlushwa yisifuba somoya esibucayi bavame ukuthola izimpawu zabo ziphikelela futhi kunzima ukuzilawula.
Ukuba nesifuba somoya esinamandla kungaba nomthelela omkhulu empilweni yansuku zonke, kuthinte imikhuba yansuku zonke, ukusebenza kanye nokuphila komphakathi.Kungathinta kokubili izingane nabantu abadala, futhi kungakhula kunoma yisiphi isikhathi. Noma kunjalo, kuncane kakhulu kunokujwayelekile ukuxilongwa kwesifuba somoya, kuthinta abantu abangaphansi kuka-10%.
Yize kungaba nzima ukubhekana nakho, futhi kungathatha isikhathi ukuthola inhlanganisela yokwelashwa efanele, kungaphathwa ngempumelelo. Kubalulekile ukuthi uzibhekele ngokucophelela ngokuthatha imishanguzo yakho njengoba unqunyiwe, ube nokubuyekezwa kwesifuba somoya njalo, uqonde ukuthi yini okubangela i-asthma futhi uxhumana nethimba lakho lezokunakekelwa kwezempilo, ukuze bazi ukuthi uzolungisa nini futhi kanjani indlela osebenzisa ngayo imithi yakho.
Uyini umehluko phakathi kwesifuba somoya esibucayi nesifuba somoya esingamahlalakhona?
Zonke izinhlobo zesifuba somoya, noma ngabe ithambile, imaphakathi noma inzima, iyizimo ezingapheli, zesikhathi eside. Isifuba somoya esingalapheki esiqatha sihlukaniswe ngeqiniso lokuthi asiphenduli kahle ekwelashweni kanye nasemithini ejwayelekile.
Siyini isifuba somoya esibucayi esibuhlungu?
Isifuba somoya esibucayi singenye igama elithi isifuba somoya esibucayi. Womabili la magama abhekisa kwisifo esingelapheki sokuvuvukala kwemigwaqo yomoya evame ukubonakaliswa yi-bronchial hyperreactivity.
Izimpawu zesifuba somoya ezinzima
Izimpawu zingalindeleka futhi zenzeke emini nasebusuku. Zingathinta izimpilo zabantu zansuku zonke kanye nekhono lokwenza imisebenzi ejwayelekile. Uma izimpawu ze-asthma ezinzima zingalawulwa kahle, zingakhungathekisa kakhulu.
Izimpawu zokuhlaselwa yisifo somoya
Uma uhlangabezana ngokungazelelwe nesifo se-asthma, khona-ke ungahlangabezana nesinye sezi zimpawu ezilandelayo:
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ezindebeni zakho, ebusweni noma kuzinzipho
Uzwa ukuthi udinga ukusukuma noma uhlale ukuze uzame nokuphefumula kalula
Uzizwa udidekile noma uthukile
Ukungakwazi ukukhuluma ngemisho ephelele
Uzizwa uphefumula kakhulu futhi ungakwazi ukuhogela noma ukukhipha ngokuphelele
Izimpawu ezingabi ngcono ngemuva kokusebenzisa i-reliever inhaler.
Ngokuhlaselwa yisifuba somoya okukhulu, izimpawu ezijwayelekile zokuphefumula noma ukukhwehlela kungenzeka zingabi zimbi. Lokhu kungenxa yokuthi izindlela zakho zomoya zingathinteka kangangokuthi awukwazi ukuthola umoya owanele ngaphakathi noma ngaphandle kwamaphaphu akho ukudala imisindo yokuphefumula noma ukukhwehlela.
Kuyisimo esiphuthumayo kwezokwelapha futhi kufanele uye esibhedlela ngokushesha. Uma kuqhathaniswa nokuhlaselwa yisifuba somoya okungahle kuthathe imizuzu embalwa, ukuhlaselwa yisifuba somoya okunzima kungahlala kusuka emahoreni kuye ezinsukwini futhi kungabeka impilo engozini uma kungalashwa.
Ithuluzi lokuhlola ubunzima be-asthma
Ukulungiswa kabusha kwe-Airway
Umphumela ongaba khona wesikhathi eside wesifuba somoya esinamandla, futhi ikakhulukazi ongalawulwa kahle, yisimo esibizwa ngokuthi ukulungiswa komoya.
Uma uke wahlaselwa yisifuba somoya njalo noma izimpawu eziningi ze-asthma ongakwazanga ukuzilawula, izindiza zakho zomoya ziba zimbi, zivuthe kakhulu futhi zibe nezibazi ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kusho ukuthi umgudu womoya uba mncane - okwenza kube nzima ukuphefumula, okwenza izimpawu zakho zibe zimbi kakhulu.
Lesi ngesinye sezizathu zokuthi kungani kubalulekile ukuphatha i-asthma yakho ngempumelelo, noma ngabe kubonakala kunzima kangakanani ngesifuba somoya. Ngokuphatha kahle, unganciphisa ubungozi bokulungiswa kabusha kwendlela.
Ukwelashwa kwesifuba somoya esibi
Akukho noyedwa ukwelashwa noma imithi Isixazululo. Wonke umuntu uthinteka ngokuhlukile futhi okusebenza kahle kumuntu oyedwa kungahle kungabi nomthelela komunye. Imithi efanayo ingabekwa njengomuntu one-asthma ethambile, kepha ngomthamo ophakeme kakhulu.
Ukwelashwa kwesifo somoya esibucayi kugxila ekuzameni ukulawula izimpawu. Uzonikezwa imithi nokwelashwa ukuphatha ukuvuvukala ezindleleni zakho zomoya futhi uvikele ukulimala kwamaphaphu. Uzokwaziswa futhi ukuthi unciphise ubungozi bokuhlangana nezimbangela ze-asthma ngangokunokwenzeka, ngoba lokhu kuzonciphisa ubungozi bokuhlaselwa yisifuba somoya.
Njengesiqalo, wonke umuntu one-asthma unqunyelwe:
I-reliever inhaler - imvamisa iluhlaza okwesibhakabhaka, le inhaler isetshenziselwa ukunikeza ukukhululeka uma uyidinga futhi kufanele ihanjiswe nawe ngaso sonke isikhathi.
Isivimbeli inhaler - esivame ukuba nsundu, siqukethe ama-corticosteroids asiza ukunciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala ezindleleni zomoya. Lokhu kudinga ukwenziwa nsuku zonke, njengoba kuchazwe ngudokotela wakho.
Uma kutholakala ukuthi une-asthma enamandla, kufanele ukhulume nodokotela wakho mayelana nokudluliselwa emtholampilo oyingcweti. Ngenkathi okunye ukuhlinzwa kokunakekelwa okuyisisekelo kunikeze abahlengikazi be-asthma abanganikeza ukwesekwa kongoti.
Imithi eyengeziwe yesifuba somoya esibi
Ngaphezu kokuncipha nokuvimbela i-inhaler, i-asthmatics enamandla ingabekwa ezinye izindlela zokwelashwa. Ungadinga ukuzama izinketho eziningi ngaphambi kokuba umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo athole ukukhetha okulungile ngezidingo zakho.
Ngaphezu kwama-inhalers, izinketho zokwelashwa zifaka:
Ama-bronchodilators asebenza isikhathi eside (ama-LBAs) - lawa angafakwa kwi-inhaler yokuvimbela futhi asize ukugcina imigwaqo yomoya ivuleke okungenani amahora ayi-12.
Abaphikisi be-Leukotriene receptor (LTRAs) - ithebhulethi engeyona eye-steroid esiza ukwehlisa umoya ohelezayo, uvimba imiphumela yama-leukotrienes (ama-molecule wokuvuvukala) nokusiza ukungezwani komzimba.
Ama-antagonists ama-muscarinic receptor asebenza isikhathi eside (ama-LAMAs) - uhlobo lwe-bronchodilator esebenza isikhathi eside engasebenza amahora ayi-12-24.
Ama-beta-agonists asebenza isikhathi eside (ama-LABAs) - olunye uhlobo lwe-bronchodilator esebenza isikhathi eside esetshenziselwa ukukhulula imisipha ezindleleni zomoya.
I-theophylline ekhishwa kancane - ithebhulethi engeyona eye-steroid esiza ukukhulula imisipha ebushelelezi ezindleleni zomoya, evumela umoya ukuba ungene kalula.
I-beta-2-agonists esebenza okwesikhashana - uhlobo lwemithi yokusiza esheshayo engasetshenziswa lapho kuvela izimpawu ze-asthma.
Ama-steroids ansuku zonke - lokhu kunqunywa kuthebhulethi noma kwifomu eliketshezi futhi luhlobo lomuthi olwa nokuvuvukala. Basebenza ngokusiza ukunciphisa ukuzwela ezindleleni zomoya.
Ama-antibody e-monoclonal (abizwa nangokuthi ama-mAbs noma ama-biologics) - uhlobo olusha lomuthi we-asthma engalawuleki kakhulu. Basebenza ngokuvimba umsebenzi wamakhemikhali omzimba omzimba abangela ukuvuvukala komoya.
Kwezinye izimo, kunganconywa i-bronchial thermoplasty. Le ifomu yenqubo yokuhlinza lapho ithubhu eliguquguqukayo lidluliselwa khona ezindleleni zomoya emaphashini ukuletha uhlobo oluthile lokwelashwa kokushisa. Imvamisa ukwelashwa kosuku nge-anesthetic yendawo, kepha kungabandakanya isidingo sezikhathi eziningana.
Kufanele futhi uthole umgomo wokugomela umkhuhlane unyaka ngamunye ekuqaleni kwenkathi yomkhuhlane. Umkhuhlane uthinta uhlelo lokuphefumula futhi ungahlala kuze kube amasonto amabili, okusho ukuthi kungaba yingozi empilweni yomuntu one-asthma enamandla. Kubalulekile ukukhetha ukudubula, hhayi isifutho samakhala, esingadala izimpawu zakho ze-asthma.
Izinguquko zokuphila ukusiza i-asthma enamandla
Kanye nemithi, kunezinguquko zendlela yokuphila ongazenza ezingasiza.
Gcina isisindo esinempilo nokuzivocavoca umzimba. Uma uthatha imithamo ephezulu yesikhathi eside yama-corticosteroids omlomo, angakhuphula ukudla futhi abangele ukuzuza kwesisindo. Kungaba nzima ukuphatha isisindo sakho nge-asthma enamandla, njengoba izimpawu zakho zingenza ukuzivocavoca kube nzima kakhulu, futhi ungahle ungabi namandla nesisusa uma ungazizwa kahle. Kepha noma ngokwenza ushintsho oluncane kokudla kwakho namazinga womsebenzi, ungenza umehluko.
Yeka ukubhema. Ukubhema kuyingcuphe enkulu yokuhlaselwa yisifuba somoya, kanye nokuhlanganiswa nezinye izinkinga eziningi zempilo. Uma ubhema futhi uhlaselwa yisifuba somoya, kufanele uzame ukuyeka. Funa usizo kudokotela wakho, umhlengikazi noma iqembu lokuyeka ukubhema ukusiza ukwenza ushintsho.
Yenza izivivinyo zokuphefumula. Ukuzijwayeza njalo izivivinyo zokuphefumula kungasiza njengoba zisiza ukuthuthukisa amandla wamaphaphu, amandla kanye nempilo. Kunezindlela ezahlukahlukene ezilungele i-asthmatics, ezinye zazo ezifundiswa ngochwepheshe noma i-physiotherapists, futhi zilula ukuzifunda nokuzenza ekhaya.
Nciphisa amazinga akho okucindezeleka. Ukunciphisa ukucindezeleka - okungaba yimbangela eyinhloko yesifuba somoya - ukufaka i-yoga, ukuzindla noma umkhuba wokucabanga empilweni yakho kungasiza.
Ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinguquko zokuphila, kuwumqondo omuhle ukuxoxa ngalokhu nodokotela wakho noma umhlengikazi wesifuba kuqala. Lokhu kuzobavumela ukuthi basayine ukwesekwa okungeziwe futhi beluleke noma yikuphi ukuguqulwa ukuhlangabezana nezidingo zakho ezithile. Abangani bakho, umndeni kanye nomqashi nabo bangasebenza njengabameli, bakusize wenze ukulungisa ekhaya lakho nasempilweni yokusebenza.
Amathuluzi wezokwelapha awusizo
Uhlu lokuhlola lokuvakashelwa yisifuba somoya lwesiguli ngaphambi kokuvakashelwa
Ukuthola okungcono kakhulu ekuvakasheni kwakho kwezokunakekelwa kwempilo
Uhlelo lwesenzo se-asthma (sezingane)
Ukuvimbela nokuphathwa kwesifuba somoya
Ngaphandle kokuthatha imithi yakho njengoba kunqunyiwe, indlela engcono yokunciphisa ubungozi bokuhlaselwa yisifuba somoya okukhulu kanye nezimpawu eziya ziba zimbi ukugwema izimbangela ngangokunokwenzeka.
Njengengxenye yohlelo lwakho lokuphathwa kwesifuba somoya, kubalulekile ukuqapha izimpawu zakho ezinzima ze-asthma. Kuyasiza ukugcina irekhodi elibhaliwe lezimpawu zakho, lapho zenzeka nanoma yiziphi izimbangela ezingabandakanyeka. Isibonelo, izimpawu zakho zingabangelwa yizici zemvelo, njenge-pollen yonyaka. Kwabesifazane, ukuguqulwa kwamazinga ama-hormone kungenza izinto zibe zimbi kakhulu.
Ngokubona amaphethini ungafunda ukuthatha isenzo ngaphambi kokuba izimpawu zibe zimbi kakhulu. Irekhodi lingasebenza futhi njengendlela yokukhuthaza, ukugqamisa ukuthi izinto zithuthuke kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Kuyasiza impela ukukwazi ukukhombisa umhlengikazi wakho wesifuba somoya noma udokotela lapho kubekiwe.
Imininingwane engaphezulu: ama-webinar namamojula wokufunda
Izimpawu Zesifuba Somoya
Ukuthatha i-Pulse of Asthma ekuvakasheni kwe-15 kweHhovisi
Isifuba Somoya Esibucayi: Ukuhlola, Ukuphatha kanye Nentuthuko Entsha
Kuxhaswe ngabakwa-GAAPP Member Organisation Ukungezwani komzimba ne-Asthma Network.
“Ayiphefumuli, Indaba Yempilo Enesifuba Somoya Esibi” bukela i-documentary ephelele ufunde kabanzi lapha.
“Umqulu Wokwenza ngcono Ukunakekelwa Kweziguli Esiphefumulweni Esinamandla” ingafundwa lapha.